Wednesday March 08, 2017 - 19:43:48 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in dhaawac culus uu gaaray Xildhibaan C/qaadir Faarax Bootaan oo ahaa guddoomiyaha guddiga difaaca gobolka Mudug ee baarlamaanka maamulka Puntland.
Goob joogayaal ayaa xaqiijiyay in dhaawac halis ah uu gaaray xildhibaanka islamarkaana uu geeriyooday Nin darawal u ahaa, ciidamo katirsan booliska maamulka Puntland ayaa gaaray goobta qaraxu ka dhacay.
Taliyaha booliska qeybta Mudug ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in dhaawaca Xildhibaan Bootaan uu aad uliito, walxaha qarxo oo gaariga xildhibaanka lagu qariyay ayaa la xaqiijiyay in ay dhaliyeen qarax xooggan oo jugtiisa laga maqlay inta badan xaafadaha waqooyiga Gaalkacyo.
C/qaadir Faarax Bootaan ayaa hayay xilka guddoomiyaha guddiga difaaca gobolka Mudug wuxuuna kaalin weyn kulahaa dagaallo sanaddii lasoo dhaafay Al Shabaab iyo 'Puntland' ku dhaxmaray deegaanada Garacad iyo Suuj oo ka kala tirsan gobollada Nugaal iyo Mudug.
Dhinaca kale war kasoo baxay xarakaa Al Shabaab ku sheegatay Mas'uuliyadda dilka Xildhibaan Bootaan sida ay baahisay idaacadda Andalus ee Afka xarakada ku hadashay, Al Shabaab ayaa C/qaadir Faarax ku tilmaamtay Murtad dhaaquud ah iyadoona ku hanjabtay in ay dili doonto xildhibaanada iyo saraakiisha maamulka 'Puntland'